Tallaalka Cudurka Covid 19 oo la geeyay dalka Jabuuti - Home somali news leader
Home NEWS Tallaalka Cudurka Covid 19 oo la geeyay dalka Jabuuti
Dowladda Jabuuti ayaa shaacisay in maanta oo Sabti ah ay heshay qeybtii ugu horreysay ee tallaalka Covid-19.
Hase yeshee Lama sheegin cadadka soo gaaray Jabuuti, balse, waxaa hay’adaha gargaarku sheegeen in toddobaadkii horena ay Jabuuti heshay cirbadihii loo isticmaali lahaa in tallaalka lagula mudo dadka.
Jabuuti waxaa la sheegay in ay muhiimadda u horreysa siinayso dadka ka weyn 50 sano, kuwa qaba xanuunada halista ah, iyo shaqaalaha caafimaadka.
Jabuuti waa waddankii ugu horreeyey ee dalalka Gobolka la isku yiraahdo Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Africa (MENA) oo tallaalkan soo gaaro.
Tallaalkan ayaa ka yimid COVAX oo ah mashruuc ay samaysay Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO, Isbahaysiga Tallaalka GAVI iyo hay’ad kale oo lagu magacaabo Isbahaysiga Diyaargarowga Cudurada faafa.
Ka sokow Jabuuti, waxaa sidoo kale ilaa haatan wadammada Bariga Afrka ee helay tallaalka ka mid ah dalka Kenya oo toddobaadkii hore uu soo gaaray 1 milyan iyo 20 kun oo goojo oo tallaalka ah. Kenya waxay sidoo kale sheegtay in ay mudnaanta siinayso shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee ka shaqeeya safka hore.
Dalka Ethiopia ayaa sidoo kale mas’uuliyiintu sheegeen in ay filanayaan shixnadda ugu horreysa ee tallaalka maalinta Axadda ee berri ah.
Soomaaliya ayaa bishii hore sheegtay in tallaalku uu soo gaari doono dabayaaqadii bishii tagtay ee Febraayo ama horraanta bisha Maarso. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan, tallaalkaasi ma soo gaadhin dalka.
Warar ayaa sheegaya in 300 oo kun oo goojo oo ah qaybtii ugu horraysay ee tallaalka ay sugaysay Soomaaliya oo ahaa 1 milyan iyo 200 kun uu maanta soo gaadhay magaalada Nairobi.
Haddii Soomaaliya ay wada hesho 1.2 milyan ee tallaalka ugu horreeya, waxay taasi ku filan tahay 1% dadka Soomaalida ah.
Hase yeeshee, dowladaha ay soo gaaraan shixnadda tallaalka ayaa laga filayaa in ay la yimaadaan qorshe ay tallaalka ugu qaybinayaan dhammaan gobollada dalka.
Ilaa haatan dowladda Soomaaliya si rasmi ah uma aysan shaacin qaabka ay doonayso in dalka loogu qaybiyo tallaalka, iyo gobol walba inta uu helayo. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaa laga sugayaa in ay dadweynaha u sharraxdo imaatinka tallaalka iyo dadka ugu horreeya ee helaya, iyo taariikhda la bilaabayo tallaalista muwaadiniinta.
Previous articleSenate passes Biden’s $ 1.9 trillion Covid-19 stimulus bill
Next articleTurkiga oo ku wareejiyay Dowlada Soomaaliya Saldhig Milatari